Maguta edhijitari - maitiro atingaite isu kushandisa matekinoroji senge izvo zvinopihwa neSIMI - Geofumadas
Kurume, 2020 Engineering, Innovations
Geofumadas kubvunzurudza muSingapore naEric Chong, Mutungamiriri uye CEO, Motorola Ltd.
Nokia inoita sei kuti zvive nyore kuti nyika ive nemaguta akapusa? Ndeipi yako mipiro mikuru inotendera izvi?
Madhorobha anotarisana nematambudziko nekuda kwekushandurwa kwakaunzwa nema megatrends emadhorobha, shanduko yemamiriro ekunze, kudyidzana kwenyika dzepasi rose uye kudzvinyirira. Mukunetseka kwavo kose, vanogadzira mavhoriyamu akakura e data iyo rechishanu mega-maitiro e digitization anogona kushandisa kuti awane ruzivo uye nekukwiridzira masisitimu anotsigira madhorobha emadhorobha.
PaRob, takadzidzira MindSphere, yedu yegore-yakavhurika IoT inoshanda system, kugonesa iyi 'smart guta'. Mindsphere yakatarwa ye "Best mu Kirasi" chikuva cheIoT nePAC. Nayo yakavhurika Ipuratifomu-se-se-Service kukwanisa, inobatsira nyanzvi kubatana kugadzira yakanakisa guta gadziriso. Kuburikidza neiyo MindConnect kugona kwayo, inogonesa iyo yakachengeteka kubatana kweNokia uye yechitatu-bato zvigadzirwa uye zvishandiso kutora chaiyo-nguva data yekukurukura data iyo inogonesa akasiyana-siyana Smart Cities. Iyo data inounganidzwa kubva kuguta rose seinogonawo kuva mazano evanoronga guta nemagadzirirwo ezvemitemo kuratidza kusimudzira kweramangwana guta rakangwara. Nekuenderera mberi kwekuvandudza kwehunyanzvi hwekunyepedzera uye data analytics, iyo nzira yekushandura data kuti ive nzwisiso uye kugadzira mazano matsva e smart guta rekushandisa iyo inogona kubatsira kugadzirisa matambudziko emumaguta anokonzerwa ne mega-maitiro uye kuwedzera kugona kwe smart guta.
Maguta ari kuwedzera kupinza padanho rinodiwa here? Unoona sei kufambira mberi? Makambani akafanana neNokia angabatsira sei kusimudzira iro kumhanya?
Nyika iri kuwedzera kuziva nezvekuvandudzwa kwemaguta akangwara. Vabatiri vakaita sehurumende, varidzi vezvivakwa, vatungamiriri vemaindasitiri, vari kuita basa rekuchinja shanduko. MuHong Kong, hurumende yakatanga yakanakisa Smart City Blueprint muna 2017, yakaisa chiratidzo chekuvandudzwa kweSmart City yedu neBlueprint 2.0 munzira. Pamusoro pekuisa mirayiridzo yakajeka yeindasitiri iyi, hurumende inopawo mari yekukurudzira yakadai semari uye kuderedzwa kwemitero kutsigira kusimudzira uye kufananidzira zvigadzirwa pachinyorwa ichi chiri kukurumidza kukura. Zvinotonyanya kukosha ndezvekuti, iri kutungamira nehurongwa hwekuchenjera reguta seEnergizing Kowloon East, uko kunoonekwa-kwe-concepts kuitiswa. Isu tinofara kwazvo kupa ruzivo rwedu mune dzakadai PoCs, semuenzaniso:
Kerbside Dhawunirodha / Dhawunirodha Yekutarisa System - Kuvandudza kuwedzera yakakosha gutter-chikamu nzvimbo uye kubatsira vashandisi kuwana inowanikwa iripo yekukodha / yekukodha bay neAI.
Energy Performance Data System - Kuisa smart home magetsi sensors yedheya chaiyo yekushandiswa kwemagetsi data kuti vashandisi vatevedzere nzira yekushandisa nemafoni emapurogiramu kunatsiridza mashandisiro emagetsi.
Pamusoro pekuunza hunyanzvi hwedu hwepasi rese, isu tinotenda isu zvakare kuti tibatsire kuvaka chikosheni chakabudirira chehunyanzvi. Nechinangwa ichi, isu takadyara mu Smart City Dhijitari Hub kuScience Park kuti tipe nzvimbo yekutanga, nyanzvi dzehunyanzvi, uye varidzi vezvivakwa kuvaka kuvaka kwavo dhijitari uye kuvandudza smart guta rekushandisa.
Kuedza kwedu muHong Kong kunoenderana nekuedza kwedu kune imwe nzvimbo kubatsira maguta kuti ave akapfuma. Semuenzaniso, kuGreat Britain, tiri kushanda neLondon pakuvakwa kwe 'Arc yeMukana'. Iyo muenzaniso weSmart City inotungamirwa neiwo masangano akazvimirira mudunhu iri uye nekubatana neGreat London London Authority, uko kuongororwa kwemaitiro ekuchenjera eguta ari kuitwa achitarisana nesimba, kutakura uye zvivakwa.
MuVienna, Austria, tiri kushanda neguta reAspern pane imwe nzvimbo inogara Smart Cities Demonstration Laboratory yekuongorora magadzirirwo uye masisitimu emadhorobha akangwara, akatarisa pakubata kwesimba uye kwakanaka masanganiswa uye kugadzira mhinduro dzemagetsi zvekare. yakaderera magetsi, kuchengetedza kwesimba uye nehungwaru kudzora kwekuparadzira mawebhusayithi.
Chii chakaita kuti ufunge nezvekutanga dhijitari smart guta?
Chiono chedu cheSmart City Dhijitari Center ndechekusimudzira smart guta rekuvandudza kuburikidza nekubatana uye kuvandudza tarenda. Yakagadziridzwa neMpfungwaSphere, Nokia 'gore-based IoT inoshanda system, iyo nzvimbo yakagadzirirwa seyakavhurika lab inoita R&D muzvivakwa, simba uye kufamba. Nekuvandudza kubatana kweIoT, digital hub yedu inovavarira kubatsira vatori vechikamu kuti vaone kushomeka kwemaguta edu uye makambani ekutsigira kuwedzera mabhizinesi avo nedijitori.
Isu tinoshuvira kuti nzvimbo yacho inosimudzira matarenda emangwana muHong Kong kutsigira kukura kweguta rakangwara. Nechikonzero ichi, iyo nzvimbo yakatanga iyo Mindsphere Academy kupa kudzidziswa uye kubatana neVocational Training Council kubatsira kuzadzisa izvo zvinodiwa nevashandi uye kukurudzira vatori vechikamu muindastiri ino.
Ndeapi mabasa makuru ezvino nzvimbo?
Yedu Smart City Dhijitari Center inovavarira kubatanidza kugadzira smart guta rekudzidzira ecosystem mukubatana pamwe nevamwe vemunharaunda vakaita sevashandi vezvivakwa, masangano edzidzo, uye kutanga. Iro nzvimbo inoda kuita seinobatanidza kugovera ruzivo nezvepamusoro tekinoroji yeIoT, kukurudzira matunhu kuvhura dhata nezvekushandisa smart guta, kuburitsa ruzivo rwekutarisa kwezvakawanda zvemaguta, uye kuongorora smart city application. Chinangwa chikuru ndechekuvaka guta rakangwara muHong Kong uye kugadzirisa hupenyu uye kugona kweguta redu.
Mudunhu ripi raunoona fambiro mberi kwazvo mukunyorwa kwedhijitari?
Isu tinoona kufambira mberi mukuvaka, simba uye mafambisirwo zvikamu izvo zvakanyanya kubatsirwa kubva kudhijitari.
Zvivakwa ndizvo zvakanyanya simba vatengi muguta, vanoshandisa 90% yemagetsi muHong Kong. Iko kune kugona kukuru kwekuvandudza kwesimba simba rekushandisa, kuderedza zvahunokanganisa pamamiriro ekunze, nekuchenjera kubata zvemukati nzvimbo kuburikidza nekuwedzera AI-powered smart technology. Semuenzaniso, yedu yeAI Chiller manejimendi inopa 24x7 mamiriro ekutarisa chirler chirimwa, ichipa kurumbidza nekukurumidza kune timu yezvivakwa zvekuvaka kuti iite mashandiro avo mukuenderera mberi. Mumwe muenzaniso ndeye "zvivakwa zvinokwanisa kutaura" zvinotaurisa zvisina basa neiyo magetsi sisitimu yekugadzira ecosystem inopindura kune izvo zvido zvezvivakwa nevanogara mairi vachiona kuti simba rinokosha reguta rinoshandiswa inoshanda uye ine simba nzira.
Muguta rine vanhu vakawanda seHong Kong, pane mukana mukuru wekukwanisa kugadzira hunyanzvi hwekufamba kuti uwane mukana wekufambisa wakasarudzika kune vagari vemo. Kuvandudzwa muV2X (mota-demo) kunoita kuti kutaurirana kusingaperi pakati pemotokari uye zvigadzirwa zvinotsigira mashandiro akadai sehungwaru kudzora matanho ekugadzirisa mamiriro akaomarara mumigwagwa. Tekinoroji dzakadaro kana dzichiitwa pamwero zvakare zvakakoshera kushanda kwakachengeteka uye kwakavimbika kushanda kwemotokari dzakazvimirira mukati meguta rose.
Tiudze nezvekubatana pakati peWindows Systems neNokia: Kubatana uku kuri kubatsira sei chikamu chegadziriro?
Motorola neWindows Systems zvine nhoroondo yekuwedzera mapurotifomu avo kuburikidza yega yega tekinoroji tekinoroji kupa mhinduro mumunda wemadhijitari mafekitori. Mubatanidzwa wakafambira mberi muna 2016 kuti uwane mikana mitsva yekukura muindasitiri uye zviwanikwa kuburikidza nekubatanidzwa kwemakanze edhijitari mhando dzeinjiniya pamwe nekudyara zvirongwa zvekudyara. Uchitarisa mumapepa edhijitari uye inosvetukira MindSphere, mubatanidzwa unoshandisa madhijitari edhijitori ekuona zvinoitwa uye basa rezvigadziro zvezvivakwa zvakabatana zvinogonesa kushandiswa kwepamberi senge "Simulation seSevhisi" mhinduro yehupenyu hwese hweasiti. Izvi zvinoderedza zvachose mararamiro ehupenyu kutenderera kubva pakugadziridza mukugadzira, kuita, uye mashandiro anogona kuwanikwa kuburikidza nekufungidzira pane mapatya edhijitari nekushandisa chete kutanga kana kuchinge kwazotarisirwa zvese uye zvakatemwa. Iyo Yakakosha Yakabatana Dhata Yemamiriro ekunze kweiyi inopa kuguma-kusvika-kumagumo edhijitari kusika iyo inogadzira yakazara uye yakaringana digital mapatya ehurongwa uye hwepfuma zvinhu. Mukubatana kwazvino, mapato ese ari maviri akavhura Plant View kuti Unganidza, Contextualize, Vimbisa, uye Vona Visita yedata kuti ugadzire mapatya edhijitari evashandisi kuti vawane mutsva. MuHong Kong, nzvimbo yedu yemagetsi yedhorobha yakangwara iri kuongorora misoro yakafanana neNetherlands yekugadzira kukosha kune vatengi uye kukurumidza shanduko yeguta rakangwara.
Iwe unorevei neClouded City Solutions?
Yakabatana City Solutions (CCS) inosanganisa iyo Internet yeZvinhu, gore remagetsi, uye maratidziro ekutarisira kutsigira smart guta manejimendi uye kugonesa kuruzhinji. Iine data yakaunganidzwa ne sensors uye smart zvishandiso zvakabatanidzwa uye zvinongedzwa nePfungwaSphere, dzakabatana zvigadziriso yedhorobha kufambisa basa reguta nekugonesa IoT kubatana uye guta data kuunganidzwa uye kuongororwa. Kuwedzeredza kweIoT sensors muguta kunogona kubvumira kuunganidzwa kwedatha yezvakatipoteredza, kusanganisira kupenya kwezvakatipoteredza, kufamba kwemigwagwa, data yezvemamiriro ekunze inosanganisira kupisa, kupukuta, kumanikidza, ruzha, danho rekudzungudza, uye zvimisheni zvakamiswa. Iyo data yakaunganidzwa inogona kuongororwa nehungwaru hwekupa kupa ruzivo kana kufanotaura remangwana rematambudziko akasiyana emaguta. Izvi zvinogona kuburitsa mazano ekushandura evanoronga maguta kuti vagadzirise matambudziko emadhorobha akadai sekuchengetedza ruzhinji, kutonga kwezvinhu, kugona simba, uye kusangana kwemotokari
Nokia iri kubatsira sei kuvaka nharaunda yevakanaka guta madhorobha kuburikidza nekutarisa pane dzidzo?
Iyo LG Smart City Developer Community (SSCDC) yakavambwa muna Ndira 24, 2019 sekuwedzera kwedhijitari dhorobha guta guta kuti asunge uye kuwedzera simba rePfungwa. SSCDC inoshamwaridzana nevashandi vezvemabhizinesi, nyanzvi dzehunyanzvi, SME, uye kutanga mune smart smart kuvandudza kuburikidza nekugovana ruzivo, mazano ekubatana, kushamwaridzana, uye mukana wekubatana. Iyo ine 4 zvakakosha zvinangwa:
Dzidzo: Inopa dzidzo yepamusoro yeIoT, masangano ekudyidzana uye seminari inotarisana nemusika kutsigira matarenda emunharaunda, mainjiniya, mudzidzi uye CXO mukukudziridza zvigadzikiso zvemadhijitari.
Networking: Vaka nyanzvi dzehunyanzvi nekugadzira mapoka anofarira emapoka nemaatangi, maUSE uye mazhinji uye ane mikana yekushamwaridzana pamusangano wakasiyana.
Co-kusikwa: Inowedzera pfungwaSphere sepamhepo chikuva chekubatana nevanhu vane pfungwa dzakafanana kushandurudza indasitiri pfungwa kuita chaiko-nyika mabasa.
Kubatana: mikana yekureva zvinogona kutanga uye maSME kune network yepasi rese yekutanga uye zveindasitiri kubatanidza kupa nhengo nhengo neruzivo uye mari kuti vakwanise kugadzirisa mhinduro nePfungwaSphere.
Nharaunda inosimudzirawo yakasimba-yakarukwa hunyanzvi ecosystem yemakambani kuti atsungirire kukanganisa kwetekinoroji kunounzwa neIoT, kuwedzera mabhizinesi avo, uye kugadzirisa matambudziko anonetsa emadhorobha ari kubuda. Pasina kana gore, SSCDC ine anopfuura makumi maviri nenhengo dzine gumi nematanhatu zviitiko zvemunharaunda zvichibva pamaoko-paIoT mashopu eMindSphere Solution Zuva, kuvhura mukana weIoT uye kugadzira nhaurirano pamukana wekukoshesana wekugadzira.
Chero chero meseji yaunoda kupa kuindasitiri yekuvaka / vashandisi.
Digitization inounza shanduko dzakashata kune maindasitiri mazhinji izvo zvinogona kuvhundutsa kana zvikasateedzerwa, asi mukana kana ukabvumwa. Muindasitiri yekuvaka iyo inoshomekedzwa nekuderera kwezvibereko uye kuwedzera mutengo, hupenyu hwese hwepurojekiti hunogona kubatsirwa kubva munongedzo.
Semuenzaniso, kuvaka ruzivo rwokuenzanisira kunogona kufananidzira chivakwa zvakaringana uye zvinyowani, uye kuvaka kunotanga chete mushure mekunge iwo chaiwo awana zvese zvinotarisirwa uye zvakatemwa. Izvi zvinogona kuvandudzwa nePfungwaSphere, iyo inogonesa chaiyo-nguva data kuunganidzwa, kusunganidzwa, uye kuongorora mukati mekutenderera kutenderera, kuvhura mimwe mikana inotariswa pane digito mapatya epurojekiti. Izvi zvinogonesa kubatanidza matekinoroji senge ekuwedzera zvigadzirwa izvo zvinogona kubatsira mukugadzirwa kwezvinhu zvekuvaka kubva kumamadhijitari emhanyisa kukurudzira kutorwa kweModular Yakabatanidzwa Kuvaka (MiC) kune inoshanda yekuvaka.
Ku shandura maitiro ekutarisa nekuvaka zvitupa, pari zvino zvichiri papepa, hunyanzvi mu blockchain tekinoroji unogona kugonesa manejimendi nekutarisa emadhijitari, kuverengera pachena, kutendeka kwemarekodhi, uye kugadzirisa basa. Digitization inopa mikana inosvika kure uye inoshandura nzira yatinovaka, kushandira pamwe, uye kushanda, kuvandudza zvikuru kugadzirwa kwekuvaka nekudzikisa mutengo wepurojekiti, uku tichiita mibairo inowoneka mukati mehupenyu hwese hwechivakwa. .
Ko Motorola inoshanda pamwe chete nemamwe makambani kuvaka matanho ekucheka-matanho ayo anogonesa kuumbwa / kuchengetedzwa kwemaguta akangwara?
Motorola inogara yakavhurika kushanda nemamwe makambani uye haina kungogumira kumakambani.
Motorola yakasaina mvumo yekunzwisisa uye yakagadzira kubatana kwakawanda muHong Kong kuti isimudzire kusimudzirwa kweguta rakangwara, semuenzaniso:
Smart City Consortium (SCC) - Inobatanidza MindSphere kune Hong Kong's smart city nharaunda kuratidza kuti MindSphere inogona seiko seguta IoT chikuva.
Hong Kong Science and Technology Parks Corporation (HKSTP): Prompt kubatana mukugadzira smart guta mhinduro neIoT uye data analytics
CLP: Gadzira mapurojekiti ekutyaira emagetsi grid, smart guta, magetsi ekugadzira uye cybersecurity.
MTR: Gadzira madhijitari ekugadzirisa mashandiro echitima kuburikidza nema analytics
VTC: Vandudza matarenda echizvarwa chinotevera kuti uve nechokwadi chekusimudzira kwemaitiro ecosystem uye kuunza mazano matsva ezvekuuya mune ramangwana.
MunaNdira wegore rino, Nokia yakaitawo chikamu muGreaterBayX Scalerater Chirongwa, chirongwa chakabatana pamwe nekutanga uye makambani anotungamira akadai seGreater Bay Ventures, HSBC neMicrosoft kubatsira vatambi kuona kwavo kuona kweguta nekushandisa mikana iri kukura iyo yakakura bay nzvimbo ine yedu domain ruzivo.
Previous Post«Previous Dhijitari Twin - Philosophy yeiyo nyowani yedhijitari yekuchinja
Next Post Geofumadas - pane zvinoitika zveiyi digital nguvaNext »